EyoKwindla 24, 2020 yi Facetime Guide Shiya Comment
Ubuya uphulaphule njani ukuba ukhetha Umculo ku Apple Watch yaye ngaba uyakwazi ukuphulaphula oko? Zonke izinto ezamkelwa, ukuba uxhomekeke phezu imodeli yakho iwotshi. kuni apha uza kufumana yonke imisebenzi ezahlukeneyo ungenza usebenzisa yakho Apple Watch ngaphandle bafundelane ngezibini ukuya iPhone.
nayiphi na Apple Watch watchOS esebenzayo 4.1 okanye ngaphezulu kuya kukunceda ukuba ukuphulaphula kwingqokelela kanye noluhlu enziwe kwi yakho iPhone. Nawe unako Tune ukuba izicelo ezifana Hilltown and iHeartRadio, njengokuba kunjalo Apple Umculo (xa unayo nomxhasi).
an Apple Watch Series 3 okanye Apple Watch Series 4 watchOS esebenzayo 4.1 okanye ngaphezulu ukwenza zonke ezi zikhankanywe ngasentla, kodwa kube nakho uqhagamshelwano ukuze Apple Radio kwaye nayiphi na umculo ifaniswe up nge iCloud.
Nangona yemifanekiso ngakumbi enongwe ukuba badlale nje umculo ngokuthi piggybacking nge iPhone yakho, i Series 3 yaye 4 ungakwazi kuba ngumsinga umculo ndingosemthethweni livela efini apho. Kuthekani sithatha i gander kwi iindlela ezahlukeneyo Phulaphula Umculo lakho Apple Watch.
1 Sebenzisa Apple Watch ye Umculo Ngaphandle iPhone
Sebenzisa Apple Watch ye Umculo Ngaphandle iPhone
Segue ukuba iwashi. Cinezela i Digital Crown ukuya ezibuyiselwe umva ukuya Ekhaya screen. Cofa kwi isicelo Umculo. Ukususela ngelo xesha, uyakwazi flip ngokusebenzisa thumbnails eziqokelelweyo zakho ezahlukeneyo kunye noluhlu. Kwelinye icala, shaya indima Library and itephu kwicandelo for lokudlala, amagcisa, Albums, okanye Songs.
Ke ubuya kuba nako isusa ngokusebenzisa assortments lalungiswa nge iwotshi yakho. Cofa ku yingqokelela, lokudlala, wezandla, okanye ihambelane ofisa nivayo. Ungakwazi ukulawula umculo yakho iwotshi yakho ngokucofa kwi Dlala / iqhosha Misa, Bouncing kwingoma elandelayo, okanye tsiba kwingoma edlulileyo. Nawe unako ukulawula umthamo ngokuvula Digital Crown.
Funda eli nqaku equka ulwazi ngokupheleleyo malunga Indlela Sebenzisa Apple Watch ye Umculo Ngaphandle iPhone. kuni apha uza kufumana yonke imisebenzi ezahlukeneyo ungenza usebenzisa yakho Apple Watch ngaphandle bafundelane ngezibini ukuya iPhone.
sifakwe phantsi: umxokozelo Facetime Tagged With: Listen Music on Your Apple Watch without iPhone